भागेर बिवाह गरेको २० दिन पछि युवती युवकको घर पुग्दा जे देखिन…. – Dailny NpNews
भागेर बिवाह गरेको २० दिन पछि युवती युवकको घर पुग्दा जे देखिन….
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ समय: १५:२८:४६
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा एक युवती घरेलु हिं’सा’को सि’का’र भएकी छन् । विष्णु–७ दुलबाका स्थानीयवासी शिवा राय यादवसँग भागी विवाह गरेकी युवती यस्तो भएकी हुन् । गत वैशाख ५ गते सर्लाहीबाट भागी बारामा बसेका युवक र युवती २० दिनपछि गाउँ फर्किए पनि युवकले आफ्नो घर जान नमानेपछि ती युवती यस्तो समस्यामा परेकी हुन् ।